यसरी हुन्छ अवैध सम्बन्धले बनेको भ्रुणको वैध पतन - Dainik Nepal
‘सुरक्षित गर्भपतन विज्ञापन’ असुरक्षित ‘सेक्स’ कार्यकलापको तथ्याङ्क बढाउने कारण
दैनिक नेपाल २०७५ असार ३ गते ११:२०
काठमाडौं, ३ असार । ५ बर्ष अघि नातामा साली पर्ने १४ वर्षीया किशोरीलाई ललाइ फकाइ गर्भवती बनाएर गर्भ पतन गराउने एक व्यक्तिलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेका महोत्तरीको वगडा ६ बस्ने ३३ वर्षका लक्ष्मण यादवले किशोरीलाई पाँच महिनासम्म विभिन्न प्रलोभनमा पारी पटक–पटक यौन शोषण गर्दै आएका थिए ।
प्रहरीका अनुसार किशोरीले आफू गर्भवती भएको जानकारी यादवलाई गराएपछि यादवले असोज ५ गते साँझ गर्भपतन गर्ने ३ वटा नाम नखुलेका ट्यावलेट किशोरीलाई खान दिएका थिए । करिव साढे ४ महिनाकी मृत छोरीलाई जन्माएपछि किशोरीमाथिको यौन शोषण सार्वजनिक भएको थियो ।
गर्भपतनपछि स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि किशोरीलाई प्रहरीले अञ्चल अस्पताल जनकपुरमा उपचार गरेर परिवारको जिम्मा लगाएको थियो । यादवलाई प्रहरीले जबरजस्ती करणीको मुद्दा लगायो ।
यो लुकाउन नसकेका कारण सतहमा आएको एउटा घटना हो । यसबाहेक काठमाडौंलगायतका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा गर्भपतन गराउनेको संख्या कम छैन ।
कतिपय वैवाहिक जीवनमा रहेर पनि परपुरुष र परस्त्रीसँग सम्बन्ध गाँस्नेहरूले गर्भपतनलाई सहज लिन थालेका छन् । अवैध सम्बन्धबाट स्थापित भएको वैध भ्रुणहत्याको संख्या निक्कै बढेको छ ।
प्रितम (नाम परिवर्तन)ले एक महिलासँग ५ महिनासम्म निरन्तर यौन सम्बन्ध राखे । र्गभ बसेपछि उनले मेरीस्टोपमा पतीपत्नी भएको भन्दै लिएर गए र २ महिनाको गर्भ पतन गराए । ‘भुलचुक गर्भ बसेपछि गर्भपतन गराउनु परेको थियो । झन्डै बिहे गर्नुपर्ने अवस्था आयो तर सुरक्षित गर्भपतनमा पुगेपछि सहज भयो ।’ गर्भ पतन पनि गराउन मिल्ने र नाम पनि गोप्य हुने भएपछि उनलाई सम्बन्ध स्थापित गराउन कुनै कठिनाई भएन ।
सोह्रखुट्टे, काठमाडौंकी १८ वर्षीया माया (नाम परिवर्तन) लाई प्रसूतिगृह थापाथलीमा भर्ना गरिएको थियो । अत्यधिक रक्तश्रावका कारण मायाको पाठेघर तत्काल निकालेर फ्याँक्नुपर्ने अवस्था आयो । पाठेघर फ्याँकिएपछि उनको ज्यान त जोगियो तर उनी कहिल्यै गर्भधारण गर्न नसक्ने भइन् । १३ साता कटेपछि मायाले औषधी पसलेसँग औषधी खरिद गरेर त्यसको सेवन गरेकी थिइन् । ९ हप्ताभन्दा माथिको गर्भ तुहाउन औषधी सेवन गर्नु भनेको ज्यान जोखिममा पार्नु हो ।
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । च्याउसरी काठमाडौंलगायतका विभिन्न सहरमा खुलेका सुरक्षित गर्भपतन गराउने ठाउँमा दैनिक जसो भिड लाग्ने गरेको छ । कतिपयले चिन्ने मान्छे आउने हुन् की भनेर छद्मभेषी नाममा समेत गलत सम्बन्ध खुलाएर गर्भ पतन गराउने गरेका छन् ।
काठमाडौंका चोकै पिच्छे खुलेका ‘सुरक्षित गर्भपतन विज्ञापन’ले असुरक्षित सेक्स कार्यकलापलाई बढोत्तरी दिने गरेको छ ।
‘कसले किन गर्भ पतन गरायो भन्ने विषय यस्ता संस्थामा गोप्य राखिने भएकाले पतीपत्नीको नाटक गरेर भ्रुण हत्या गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ’, एक स्वास्थ्यकर्मीले भने,‘किशोरकिशोरीदेखि बयस्कसम्मको गर्भपतनको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।’
गर्भ पतनका कारण कतिपय युवती पुनः आमा नै बन्न नसक्नेगरीका घटना पनि कम छैनन् । यस्ता घटना आफूखुसी गर्भपतन गराउने औषधी सेवनले निम्त्याएको जटिलता भएको प्रसुति गृह, थापाथलीका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम बताउँछन् ।
पटक–पटक आफूखुसी गर्भपतनको औषधी सेवन गर्दा त्यसले पूर्ण रूपमा भ्रूणलाई बाहिर निकाल्न सक्दैन र फोहोर त्यही जम्मा भएर बस्छ । डा. गौतम भन्छने,‘त्यो फोहोरका कारण गर्भ बस्दा भू्रण पाठेघरमा जान नपाई नलीमै विकास हुन थाल्छ, त्यस्तो अवस्थामा औषधी सेवनले नली फुट्न गै संक्रमण बढ्ने एवं रक्तश्राव भएर गर्भवतीको मृत्युसम्म हुन सक्छ ।’
महिनावारी भएको दिनबाट गणना गर्दा २८ हप्ता भन्दा पहिले गर्भमा भएका भ्रुण, विकसित भ्रुण अथवा शिशु बाहिर निस्कने प्रकृयालाई बुझिन्छ । जुनसुकै गर्भावस्थाको गणना गर्दा महिनावारी भएको पहिलो दिनबाट गणना गरिन्छ । उक्त दिनबाट २८० दिन वा ४० हप्ता वा ९ महिना ७ दिन पुगेपछि गर्भावस्था पूर्ण हुन्छ ।
विकसित देशहरूमा भने विभिन्न आधुनिक उपकरणको प्रयोग गरी बचाउन सकिने हुनाले २८ हप्ता अघिको १०० ग्राम तौलको शिशु बाहिरिएमा मात्र गर्भपतन भनिन्छ । सुरक्षीत गर्भपतन महिलाहरूको प्रजनन् अधिकार हा े। असुरक्षित गर्भपतन रोक्नु हाम्रो दाहित्व हो । नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रकृया २०६०ले १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा पतन गर्न कानूनले मान्यता दिएको छ । उता जब्जस्ति करणी र हाडनाता भएको अवस्थामा १८ हप्तासम्मको गर्भ फाल्न पाइने व्यबस्था छ । लिङ्ग पहिचान गरेर, गर्भवती महिलाको सहमतिविना र १२ हप्ताभन्दा वढिको गर्भपतन गराउन कानूनले बन्देज लगाएको छ । अप्ठ्यारो परिस्थितिमा विशेषज्ञ र अनुमति प्राप्त चिकित्सकले मात्र १८ हप्तासम्मको गर्भ फाल्न पाउने व्यबस्था रहेको छ ।
त्यसो त नेपालको नयाँ कानुनले गर्भ भए पनि महिलाले बच्चालाई जन्म दिन पाउने कानुन पास गरिसकेको छ । त्यसका लागि बाबुको नाम अनिवार्य भएको छैन । तर सामाजिक बन्धन र अनैतिक सम्बन्धले बसेका गर्भहरू भने निरन्तर पतन हुने क्रम भने रोकिएको छैन ।